कृषि जगत: नेपाली बीउको सुरक्षा | चितवन पोष्ट दैनिक
कृषि जगत: नेपाली बीउको सुरक्षा
२०७० माघ ७, मंगलवार ०३:५० गते
आजको जमाना विज्ञान र प्रविधिको हो । केही मानिसहरु समाजको परिवर्तन देखेर र सो परिवर्तनले आफ्नो हैकम चल्न नदेला भनेर समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने कुचेस्टा गरिरहेका छन् । आणविक शक्तिले आज संसारको कति ठूलो आवश्यकता पूरा गरेको छ, यदि यो शक्तिलाई मानव संहारमा प्रयोग हु“दा लाखौँ मानिस मर्न सक्दछन् भनेर यो आणविक शक्तिमा अनुसन्धान नगरेको भए यो संसार कस्तो हुनेथियो होला ? विभिन्न बालीका उन्नत जातको विकास नगरेको भए र डिउरम जातको गहुँको विकास नगरेको भए आज मानिसले के खाने थियो होला ? संसारमा हुन लागेको भुखमरीबाट मानिसलाई बचाएबापत डा. नर्मन इ. बोर्लगलाई शान्तिका लागि नोबल पुरस्कार यसैबापत दिइयो । खुकुरीले मानिस मार्ने भयो भनेर वा हाते औजारले मानिस मार्छ भनेर हतियारहरुको निर्माण नभएको भए आज काम कति असजिलो हुनेथियो होला ?
यो संसार परिवर्तनशील छ, कसैले यो परिवर्तनलाई रोक्न खोजेर हुँदैन र यो रोक्न सकिँदै सकिँदैन । अन्न उत्पादनलाई हेर्ने हो भने पनि बुझ्न सकिन्छ कि धेरै वा विकसित रुपमा अन्न उत्पादन गर्न मानो छरेर मात्रै मुरी उत्पादन हुन्छ । मानोको संहारपछि मात्रै मुरीको कल्पना गर्न सकिन्छ, होइन भने परिवर्तन हुने हुँदै हुँदैन, मात्र यो परिवर्तनलाई कसरी बहुजन हिताय र बहुजन सुखायमा लैजाने भन्नेको मात्र चिन्ता हो ।
बर्डफ्लुबाट आज संसार तर्सिरहेको छ, किन ? बर्डफ्लुले मानिस लाई केही गर्दैन । यसको संक्रमणबाट आजका दिनसम्म पुग न पुग ३५० को हाराहारीमा मानिस मरेका छन् । तर, एड्सले दैनिक १००० भन्दा बढी मानिस मरिरहेका छन् तर मानिस तर्सेका छैनन्, किन ? अचम्म लाग्दछ, होइन र ? होइन, किनभने बर्डफ्लु यदि मानिसबाट मानिसमा सर्ने भयो भने पेन्डमिक फ्लु हुन सक्दछ भन्ने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण लाखौँ मानिस मर्न सक्दछन् भन्ने अनुमान छ । यसै कारण मानिसहरु बर्डफ्लुस“ग डराएका हुन् । एड्समा हामी सतर्क हुन सकिन्छ, त्यसमा सकिँदैन । त्यसैले, मानिस डराएका छन्, तर आजसम्म मानिसबाट मानिसमा सरेको पाइएको छैन । यदि यो डरले कुखुरापालन छोडेमा के हुनेथियो होला ?
यस्तै, सम्भावना जिएमओ जातमा पनि हो । कुनै एक विरूवामा अन्य प्रजातिको जिन मोडिफिकेसन गरेर राख्दा रोगÞ नलाग्ने, कीराले खान नसक्ने, झार मार्ने विÈादीले बालीलाई नमार्ने, गुण हाल्दा र त्यसबाट उत्पादित उपज मानव आहारमा प्रयोग हु“दा कतै मानव सभ्यतामा नै विचलन आउने त होइन ? भन्ने शंका गरिएको छ । यो सबैले गरेको शंका मात्र हो, यो पनि प्रविधिकै चमत्कार हो । जिएमओको बारेमा आज विश्व दुई भागमा विभाजित छ । एउटा पÔ, यसको पÔमा छ भने अर्को पÔ यसको विपÔमा रहेको छ । जसरी हिजो विकास भएका प्रविधिहरुलाई व्यवस्थित गरियो, यो प्रविधिलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरूरी छ । तर, प्रविधिकै विरोध गर्नु भनेको बगिरहेको खोलालाई निकास नबनाई रोक्न खोज्नु नै हो । जसरी खोलोबिना निकास थुन्दा थुनेको बाँध भत्काएर जान्छ, त्यसरी नै निकासबिनाको प्रविधिको विरोध र निÈेधले भोलि भयावह स्थिति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
आज मानव आहारका लागि कृÈिमात्र एक Ôेत्र हो, जसबाट यो सम्भब छ । जमिन बढ्ने अवस्थामा छैन तर मानव संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । संसारका जति पनि लडाइँहरु भएका छन्– गाँस, बास र कपासकै लागि भएका छन् । हिजोको आदिम समाज होस् वा आजको विकसित समाज होस्, गाँसको जोहो सबैलाई सबैभन्दा पहिलो हुने गर्दछ । यसै कारण, सबै देशका सरकारहरु खानेकुराको उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । हाम्रो देशमा पनि यसैका लागि कृÈि विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । कृÈि अनुसन्धान, कृÈि प्रसार र कृÈि शिÔा यसका लागि अनिवार्य छन् ।
हिजोका जातहरुले दिने उत्पादन, हिजोको कृÈि प्रणालीले दिने उत्पादनले बढ्दो जनसंख्यालाई खान पुग्ने अवस्था नभएपछि वैज्ञानिकहरुले आफ्ना रैथाने जातभित्र भएका राम्रा गुणहरुलाई कुनै एक जातमा समेट्ने प्रयत्नस्वरुप वर्णशंकर जातको विकास भएको हो । यस्ता वर्णशंकर जातले बीउकै कारणबाट २०५ बढी उत्पादन लिन सम्भव हुन्छ भने व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्दा दोब्बर उत्पादन लिन सक्ने अवस्था आएको तपाईं हामीलाई थाहा छ । हामी हाम्रो देशका रैथाने जातबाट वर्णशंकर जात उत्पादन गर्न सजिलै सक्दछौँ । तर, सरकार यसमा घनीभूत तरिकाले लाग्नुपर्दछ । यदि हामीले यस्ता जातहरु आफ्नो देशमा उत्पादन नगर्ने अनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा यस्ता जात बर्सेनि आयात गरिरहनु पर्ने बाध्यता हुन पुग्दछ ।
केही मानिसहरु यसरी बर्सेनि बीउ किसानले किन्नुपर्दा अथवा यस्ता वर्णशंकर बीउ किसानले राख्न नपाउने हुँदा किसानले आफ्नो बीउको स्वामित्व गुमाउने हुन्छ भन्दै वर्णशंकर जातको विरोध गरिरहेका छन् । बीउ हिजो हाम्रा किसान दाजुभाइले आफ्नो खेतमा बल्याउने गर्नुहुन्थ्यो । सबैले बीउ बल्याउने गर्दैनथे, निश्चित व्यक्तिले यो काम गर्ने गर्दथे । जसले गर्दथे, बीउ सबैभन्दा राम्रो एकनास भएको ठाउँको छान्ने गरिन्थ्यो । उन्नत बीउ उत्पादन प्रविधि पनि त्यस्तै हो, तर यसमा निश्चित प्रविधि र निश्चित ठाउँमा मात्र गरिने हुँदा किसानले वर्णशंकर नभए पनि उन्नत बीउ सधैँ किन्ने नै गर्नुपर्दछ । अब वर्णशंकर बीउमा उन्नत बीउ उत्पादनमा भन्दा अलि बढी मेहनत तथा खर्च लाग्ने हुनाले अलिकति मह“गो हुने गर्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । तर, यसले नेपाली किसानको बीउमाथिको स्वामित्व अन्त्य गर्दैन । तर, यदि नेपाली वर्णशंकर जात नभई विदेशी वर्णशंकर जातमा मात्र निर्भर रहने हो भने त्यस्तो अवस्था आउन सक्दछ । यसैले, सरकारी वा स्वदेशी बीउ कार्यक्रम बलियो हुनु जरूरी छ । यदि नेपाली बीउ कार्यक्रम बलियो हुँदैन भने यहाँ विदेशी वर्णशंकर बीउले हालीमुहाली गर्नेछ । हाम्रा जात हराउने छन्, किसान विदेशी बीउमा निर्भर हुनुपर्ने छ । यस कारण हामीले नेपाली वर्णशंकर जातको विकासका लागि लागिपर्नु पर्छ । आफू नगर्ने, अरुले ग¥यो भनेर विरोध गर्नुको कुनै तुक हुनेछैन ।
अर्कोतर्फ नेपाली बीउ बजारमा जिएमओको प्रवेश भनेर निकै ठूलो स्वरमा कोकोहोलो मच्चाइएको छ । यो कोकोहोलोको पछाडि नेपालमा जिएमओ आयो भनेर गरिएको नभई कसैको विरोधका लागि गरिएको छ । कसैले नेपाली बीउको निÈेधका लागि योजना बनाएको भए गर्न जरूरी छ । आजको जमाना बायोटेक्नोलोजीको हो, मोन्सान्टो, मेटाहेलिक्स, सिन्जेटा, पायोनियर, बायोसिडजस्ता थुप्रै कम्पनीहरु छन्, जसले बायोटेक्नोलोजी प्रयोग गरेका छन् र बायोटेक्नोलोजी प्रोडक्ट उत्पादन गरेका छन् । यी सबै जिएमओ जातको विकासमा लागेका छन् । नेपालमा यी कम्पनीहरु २०४५ सालबाटै बजारमा छन् ।
भारतमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै औपचारिकता चाहिँदैन । जात दर्ताको कुरो पनि २०६४ तिरबाट मात्र अलिअलि सुरू गरिएको हो । त्यसबेला पनि जिएमओ जातको विकास यी कम्पनीहरुले गरिसकेका थिए । आज आएर मोन्सान्टोलाई बीउ ल्याउन त्यसमा पनि जिएमओ जात ल्याउन सर्वोच्च अदालतले रोकेको र सबै सरोकारवालालाई बोलाउने कुरो गरेको छ । के जिएमओ जातले नेपाली बीउलाई बिगार्ने हो भने बिगारिसकेको हुनुपर्दछ, होइन भोलिको लागि हो भने यो जात बाजा बजाएर आउने होइन, मकैको बीउ जिएमओ र नन् जिएमओ छुट्याउने प्रविधि र प्राविधिक हामीस“ग हुनुपर्दछ । यो नभएको अवस्थामा के गर्ने, विरोध गर्नेले पनि विकल्प दिनुपर्दछ भने सरकारले पनि सम्भावित नाकाहरुमा यो सुविधा राख्नुपर्दछ । होइन भने बायोटेक्नोलोजी प्रविधि संसारका सबैले मानेको प्रविधि हो, यसबाट कसरी फाइदा लिने, यसको सही सदुपयोग कसरी गर्ने ? त्यतातिर सोच्नु जरूरी छ । नत्र भने विरोध गर्ने वैज्ञानिकहरु नभई गैरराजनीतिक संगठन का अभियन्ताहरु छन्, उनीहरुलाई डलरको खेती गर्ने माध्यम वा विÈयबाहेक यो अरु केही हुनेछैन ।